राउटेलाई चुम्बन गर्ने रेखाले राउटे महिलामाथि भएको पीडामा किन बोलिनन् ? - Mitho Khabar
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on राउटेलाई चुम्बन गर्ने रेखाले राउटे महिलामाथि भएको पीडामा किन बोलिनन् ?
अन्त्यमा रोचक कुरा त के छ भने, एउटा राउटे दाईले त मलाई चिन्ने पो रहेछ भन्या !! उहाँले मेरो फिल्म सुर्खेतमा गएर हेर्नु भएको थियो रे तर फिल्म को नाम चाहीँ भुल्नु भएछ र पनि म त्यो पल धरै नै खुसि भए र म कलाकार भएको मा निकै गर्भ महसुश भएर आयो। मेरा लाखौ शुभचिन्तकहरु मध्ये त्यो राउटे दाई आज मेरो लागी करोडौ शुभचिन्तकहरु बराबर थिए । अन्तमा ‘झिम झिम सानु नझिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म’ बोलको गीत उहाँहरुले गाउनु भयो र हामी सबै परिवारसँगै नाचेर फेरि चाँडै भेट्ने र वाचा का साथ आएका छौँ ।